Impesheni enganikeli: ngingayithola? | Ezezimali Zomnotho
Uma kukhulunywa ngempesheni, okunye okungaziwa kakhulu yimpesheni okuthiwa ayinayo imali. Kepha uyazi ngempela ukuthi lolu hlobo losizo lomphakathi luyini? Yebo, kufanele wazi ukuthi lolu hlobo lwempesheni yilona olubhekisa ezinzuzweni zezomnotho nobude besikhathi esinqunyiwe, yize kungenjalo ngaso sonke isikhathi, ukunikezwa kwaso ngokuvamile kukhonjelwa ngaphambi kwesikhathi ubudlelwane bezomthetho ne-Social Security (gunyaza ubuncane besikhathi sokunikela ezimweni ezithile), inqobo nje uma ezinye izidingo zifeziwe.
Impesheni enganikeli ayihlobene nokubuyekezwa imvamisa yempesheni eSpain. Njengesibonelo, iphrojekthi yesabelomali evunyelwe ngalo Lwesibili nguMkhandlu WoNgqongqoshe ibona ukuthi kuzonyuka impesheni ephansi kakhulu ye- phakathi kuka-1% no-3%, kuya ngohlobo nesigaba sempesheni, ngokuvuma ikhanda eqenjini labathathe umhlalaphansi abenze imibhikisho eminingi emasontweni edlule kulo lonke elaseSpain. Yebo, lokhu kukhushulwa akuthinti impesheni enganikeli. Uma kungenjalo, kunalokho, ihlala ngaphansi kwemikhawulo efanayo kuze kube manje.
Okunye okumele ukunakekele kusukela manje empeshenini enganikeli ukuthi kunezidingo ezinzima kakhulu okufanele zifezwe. Ngoba akuwona wonke umuntu ongahlangabezana nezinye zezidingo abazifunayo ekuqoqweni kwabo okuhambisanayo. Ngoba awukwazi ukukhohlwa lokho ngezinga elikhulu noma elincane impesheni enganikeli kuyinkokhelo yomphakathi kulabo bantu abangazange banikele iminyaka eyanele ukuze bakwazi ukuqoqa okuyizimpesheni ezinikelayo. Lo ngumehluko obalulekile okufanele uwuthathe ngokuqonda kwawo okuphelele.
1 Impesheni enganikeli: ngubani ongayithola?
2 Inani lale mpesheni
3 Imali engenayo ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi
4 Kususelwa kumholo wakho
5 Ungazibeka kuphi ngokusemthethweni lezi zibonelelo?
6 Ukubuyekezwa kabusha ngo-2018
7 Ukuthatha umhlalaphansi nokukhubazeka
Impesheni enganikeli: ngubani ongayithola?
Vele, akuwona wonke umuntu onokufinyelela kulolu hlobo losizo lomphakathi. Uma unesithakazelo kuyo, ngeke ube nokunye ongakwenza ngaphandle kokwazi ukuthi yiziphi izidingo lezi zimali ezizokufuna kuwe. Phakathi kwalabo abavelele kukhona esizobalula ngezansi:
Kufanele ube nefayela le- ubuncane beminyaka engama-65 futhi ongayimangalela kuyo nganoma yisiphi isikhathi empilweni yakho.
La uzohlala ngokusemthethweni eSpain. Isikhathi esincane okungenani iminyaka eyishumi yokuhlala. Okuthi, ezimbili zazo kumele ngabe zazivele ngaphambi kosuku lokufaka isicelo sempesheni engakhokhi futhi ngaphandle kokuphazamiseka.
Kufanele empeleni entula imali. Ngalo mqondo, uzohlanganiswa naleli qembu lomphakathi lapho umholo wakho wonyaka ungeqi ama-euro ayi-5.136,60.
Ngeke ube nelungelo lokuthola noma yiziphi izimpesheni zomhlalaphansi ezaziwa ngokuthi zinikela ngokungahambisani nezidingo abazicelayo. Phakathi kwazo, okunye okubaluleke kakhulu ukuthi awukaze unikele iminyaka eyishumi nanhlanu ohlelweni lokuphepha komphakathi jikelele noma okungenani njengomsebenzi ozisebenzayo.
Inani lale mpesheni
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuqinisekisa inani lempesheni enganikeli. Ngoba akuyona inani elifanayo lentela. Uma kungenjalo, kunalokho, amanani aphansi kakhulu lokho ngeke kukuvumele ukuthi ukujabulele ukuma amandla okuthenga. Akumangalisi ukuthi lezi zinhlobo ezikhethekile zempesheni zibhekwa njengezinzuzo zomphakathi inhloso yazo enkulu ukuthi ukwanelisa izidingo zakho ezisheshayo. Akukho okunye futhi ngenxa yalesi sizathu kuyimali ephansi kakhulu ongadala enye inkinga ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi. Yinto okufanele uyicabangele, ikhethekile uma untula isikhathi sokufaka iminyaka eyishumi nanhlanu empilweni yakho yobungcweti.
Ukuqhathanisa nempesheni enikelayo, kufanele wazi inani lalawa ngemuva kokulungiswa kokugcina okwenziwe nguhulumeni wesizwe. Yebo, izimpesheni ezinenani lanyanga zonke elifinyelela kuma-euro angama-700 ngenyanga (ama-euro angu-9.800 ngonyaka) izonyuka kulo nyaka ngo-1,5%, kuhlomula abahola impesheni abayizigidi eziyi-1,5, kuyilapho impesheni enenani eliphakathi kwama-euro ayizi-700 kuya kwayi-860 ngenyanga (ama-12.040 euros ngonyaka) izokwenyuka kancane kancane, i-1%, ezohlomulisa abahola impesheni abayi-880.000, ngokwezibalo ezenziwe uhulumeni.
Imali engenayo ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi
Kunoma ikuphi, kudingekile ngokuphelele ukuthi wazi ngamandla ukuthi yini ozoyithola kusukela manje uma ukhetha impesheni enikelayo. Ngoba kungaba nezinhlanganisela eziningi njengoba ubona kulezi zikhathi eziqondile. Hhayi ngeze, i inani lempesheni enganikeli wokuthatha umhlalaphansi, kulo nyaka i-2018 ahlelwe ngamanani alandelayo:
Okuphelele: 5136,6 euros njalo ngonyaka.
Ubuncane: Ama-euro angu-1284,15 ngonyaka
Ukwanda okugcwele kanye no-50%: 7704,9 euros ngonyaka.
Ngakolunye uhlangothi, impesheni engathathi hlangothi yomhlalaphansi ayisoze yeqa ama-euro angama-5136,6 ngonyaka ngaphandle kwaleyo abahola impesheni yokukhubazeka okunganikeli ngezinga elithile lokukhubazeka elilingana noma elingaphezu kuka-75%. Lapho kuzodingeka khona ukufakazela isidingo sosizo lomunye umuntu ukwenza izinto ezibalulekile empilweni. Uma ngabe kunjalo, kufanele wazi ukuthi inani lempesheni yakho yokuthatha umhlalaphansi lizoba ngaphezulu ngama-50% kunenani eligcwele lolo hlobo lwemihlomulo. Okusho ukuthi, kulo nyaka wamanje, uzokhokhisa inani eliphelele ngalo mqondo wama-euro angu-7.704,90.
Kususelwa kumholo wakho
Kodwa-ke, ngeke kube lula kangaka ukuthola amanani okukhulunywe ngawo ngenhla. Phakathi kwezinye izizathu, ngoba inani lingahluka ngokuya ngeholo lomuntu siqu noma iyunithi lomndeni ohlala kulo. Noma kunjalo, ngeke ibe ngaphansi kuka-25% yenani eligcwele elimakiwe. Ngamanye amagama, ayinakuba ngaphansi kwama-euro ayi-1284,15 ngonyaka. Lokhu empeleni kusho ukuthi uma umuntu onentshisekelo anenye imali engenayo, ngeke akwazi ukuqoqa inani eliphakeme. Uma kungenjalo, kunalokho, luzokwehliswa kancane kancane luze lufinyelele esilinganisweni esincane salolu sizo lwezenhlalakahle kubantu abathathe umhlalaphansi.
Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka futhi ukuthi abazuzi abaningana balolu hlobo lwempesheni bahlala ndawonye emndenini. Uma kunjalo, umholo walolu hlobo lomhlalaphansi uyohluka kakhulu futhi ngokuya ngezimo ezilandelayo esiziphakamisayo ngezansi:
Abazuzi ababili bempesheni abangakhokhi: 4633,18 euro ngonyaka ngomzuzi ngamunye.
Abahlomuli abathathu bempesheni abangaxhasi: 4109, 28 euro ngonyaka ngomzuzi ngamunye.
Ungazibeka kuphi ngokusemthethweni lezi zibonelelo?
Esinye isici okufanele usinake kusuka manje kuqhubeke ukuthi kufanele uyephi lapho ufuna khona impesheni engakhokhi. Izinqubo zokuphatha zingenziwa kufayela le- Amahhovisi Ezokuphepha Komphakathi, IMSERSO noma emahhovisi Ezinsizakalo Zomphakathi womphakathi wakho ozimele ohlala kuwo. Kuzodingeka ngokuphelele ukuthi unikeze yonke imibhalo abayidingayo ekuqoqeni le mibono. Lapho kwamanye amacala, ukumenyezelwa kwemali engenayo yeminyaka edlule nakho kuzodingeka.
Ngaphakathi phakathi kwenyanga nezinyanga ezintathu Bazophendula kulesi sidingo. Ngomqondo, uma uhlangabezana nazo zonke izici zokuqoqa lo mhlalaphansi okhethekile. Uma kunjalo, uzokwazi ukuthola le mali esikhathini esingeqile ngokweqile. Yize noma ngasiphi isikhathi inani laso lingahluka, kuya ngezindaba ezethulwayo maqondana neholo ongaba nalo kulesi sikhathi sempilo yakho. Ngomlingiswa ongaziwa ngokwakhiwa kwale nkokhelo esemthethweni lapho ethatha umhlalaphansi.
Ukubuyekezwa kabusha ngo-2018
Kunoma ikuphi, impesheni engakhokhi izobuyekezwa kulo nyaka ngo-0,25%. Abantu abahlangabezana nezidingo ezichazwe ngenhla kumele bahambise ifomu lesicelo eligcwaliswe ngokufanele kanye nemibhalo edingekayo echazwe kwifomu ngalinye. Izokwenziwa ibe semthethweni kulezi zikhungo ezisemthethweni ezishiwo ngenhla. Kepha ukuze ube nenduduzo eyengeziwe yokuphatha le nqubo, amamodeli angalahlwa nge-Intanethi ngoba asebenza ngokuphelele.
Kufanele wazi ukuthi lolu hlobo lwezinzuzo zezomnotho luhloselwe labo abanjalo esimweni sokudinga ukuvikeleka. Lokho wukuthi, abanazo izinsiza ezanele zokuziphilisa ngaphansi kwemigomo ebekwe ngokomthetho. Yize bengakwazi ukunikela ngesikhathi esanele sokufinyelela ezinzuzweni zezinga lokunikela. Kunoma ikuphi, kunezindlela eziningana kulezi zinzuzo futhi zibhekiswe ezingxenyeni ezifanele zenhlalo njengokukhubazeka nokuthatha umhlalaphansi.
Ukuthatha umhlalaphansi nokukhubazeka
Kuyaqondakala ngokuthatha umhlalaphansi okujwayelekile, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi ngenxa yesimo sokuhlanganyela, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi ngaphandle kokuba yilungu elihlangene, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi okutholakala ekuyekisweni komsebenzi ngokuzithandela, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi ngentando yomsebenzi, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi ngenxa yokwehliswa kweMinimum iminyaka yobudala ngenxa yokwenza imisebenzi enzima, enobuthi futhi engenampilo, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kwabasebenzi abakhubazekile, ukuthatha umhlalaphansi okuyingxenye, ukuthatha umhlalaphansi okuguquguqukayo kanye nokuthatha umhlalaphansi okhethekile eminyakeni engama-64.
Esinye isici sokuhlola sivela eqinisweni lokuthi zombili izimpesheni ezinikelayo nezinganikeli fakela amacala okukhubazeka nawokuthatha umhlalaphansi. Owokuqala uphinde ahlanganise ukukhubazeka unomphela (ukukhubazeka okuphelele, okuphelele futhi okunzima) nokufa (ubufelokazi nendawo yezintandane kusiza amalungu omndeni). Zihloselwe izingxenye ezifanele zenhlalo njengokukhubazeka nokuthatha umhlalaphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Impesheni enganikeli: ngingayithola?